Wajiga daallan - Sida loo macsalaameeyo dawooyin fudud | Bezzia
Susana godoy | 11/05/2022 12:00 | Quruxda
Ma leedahay waji daalan maalin kasta? Markaa waa waqtigii macsalaamayn lahaa adiga oo sharad ku sameynaya talooyinka ugu fiican. Waa run in ay jiraan kiriimyo badan oo suuqa yaal, qaarna waanu isticmaali doonnaa, laakiin inta ka horreysa, waxa habboon in lagu sharad galo isbeddellada qaarkood ee hab-nololeedkayaga oo hagaajin doona maqaarkayaga iyo daalkaas aan soo sheegnay.
Mararka qaarkood ma aha indhaha oo kaliya iyo bararkaas bararsan ee maalinteena kharibi kara. ama toddobaadka. Laakiin sidoo kale waxay noqon doontaa maqaarka la arki karo iftiin la'aan iyo wareegyada mugdiga ah ee indhaha hoostooda oo naga joojinaya inaan ka tagno midabkaas mugdiga ah oo weli ka dhigaya daal badan. Hadda waa waqtigii ugu fiicnaa ee lagu jabin lahaa waxaas oo dhan. Ogow!
1 Nasasho badan oo wanaagsan
2 Ku dhaqaaji wareegga adigoo isticmaalaya duugis
3 Had iyo jeer sharad ku saabsan fuuqbaxa
4 Baraf ama biyo aad u qabow oo lagu macsalaameeyo weji daalan
5 Qajaar indhaha
Nasasho badan oo wanaagsan
Haa, way fududahay in la yidhaahdo laakiin ma fududa in la fuliyo maalin kasta. Sababtoo ah marar badan kuma xirna annaga oo keliya, in kasta oo aan wax badan qabanno. Waa waqtigii hurdada la qabsan lahaa, taas oo aan hubo inaad haysato. Isku day inaad seexato dhawr daqiiqo ka hor maalin kasta, meel dhig mobaylkaga gacanta ama aaladaha kale nus saac ka hor intaadan seexan, sidoo kale qaado qubays kulul. Kuwani waa qaar ka mid ah tillaabooyinka kaa caawin kara nasinta jirka iyo sida, ka dhig Morpheus inuu nagu soo booqdo. Sababtoo ah inta soo hartay waa saldhigga wejiga oo dhan iyo maqaar aad u ifaya. Maadaama ay tahay xilliga hurdada marka dib u cusboonaysiinta unuggu ay dhacdo, iyo sidoo kale ogsijiinteeda. Taas oo keliya ma aha, laakiin jidhkaaga oo dhan, kaas oo hubaal u qaylinaya nasashadaas.
Ku dhaqaaji wareegga adigoo isticmaalaya duugis
Iyada oo duugista, marka lagu daro firfircoonida wareegga, waxaan sidoo kale awood u yeelan doonaa inaan dhawaaqno oo meesha ka saara xadhkaha muujinta iyo sidoo kale gaadhitaanka natiijo dhalin yaro ah oo cusub oo maqaarkeena ah. Waxay leedahay dhammaan faa'iidooyinkaas iyo qaar kale oo badan, markaa waa inaad ku dhex dartaa quruxdaada maalinlaha ah. Duugista waxaa lagu samayn karaa caarada faraha oo ka faa'iidayso fursad aad ku marsato nooc ka mid ah saliid ama kareem si ay u sahlanaato. Xusuusnow in ay noqon doonaan kuwo wareeg ah oo mar walba kor u kacaya, maadaama ay tani tahay sida aan uga faa'iideysaneyno oo aan ku macsalaameyno laalaabyada soo baxaya.
Had iyo jeer sharad ku saabsan fuuqbaxa
Fuuq-baxa waa inuu had iyo jeer ku jiraa nolosheenna. Dhinaca kale, waxaan u marsan doonaa dibadda iyada oo ay uga mahadcelinayaan kiriimyada ama maaskaro. Maxaa yeelay, sidaas ayaa wejiga lagu arki doonaa iftiin aad u badan. Laakiin ma ilaawi karno inaan cabno biyo ku filan maalin kasta, maadaama maqaarku uu sidoo kale muujin karo xoogaa dhibaato ah oo gudaha ah. Sidaa darteed, joogitaanka fuuq-baxa ama fuuq-celinta ayaa had iyo jeer ah mid ka mid ah xalalka ugu fiican ee la tixgeliyo. Dabcan, haddii ay kugu adag tahay inaad cabto biyo badan, waxaad had iyo jeer ku caawin kartaa naftaada faleebooyinka, tusaale ahaan, ama biyo leh liin.
Baraf ama biyo aad u qabow oo lagu macsalaameeyo weji daalan
In lagu macsalaameeyo wejiga daalan waxa kale oo lagu samayn karaa dawooyinka guriga. Hubaal inaad horeba u taqaanay khiyaamada barafka, kaas oo, markii la dhaafo Waxay isla markiiba saameyn doontaa iyadoo adkeyneysa maqaarka oo ka tageysa bararka.. Si la mid ah, waxaad sidoo kale ku dhaqi kartaa wejigaaga biyo aad u qabow, sababtoo ah saameyntu aad ayey isugu mid tahay. Waxay kicisaa wareegga dhiigga, waxay xirtaa daloollada waxayna sidoo kale xoogaa kala baxdaa wejiga. Maxaa kale oo aan codsan karnaa?
Indhaha gaar ahaan iyo kuwa mugdiga ah, waxaa jira dawooyin badan oo guriga ah oo aan ka heli karno. Laakiin shaki la'aan, xaleef qajaar oo dhawaan la jarjaray iyo in aad ku nasato daqiiqado yar iyaga waa mid ka mid ah xalalka ugu fiican ee looga tago wejiga daalka ah. Jeexitaanka oo dhan waxaad ku dhejin kartaa indhaha, sidaan soo sheegnay, ama kala badh gooyn kartaa bisha si aad u dul saarto wareegyada mugdiga ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Quruxda » Sida loo macsalaameeyo wejiga daallan
Xagaaga Sounds, ururinta ciida Springfield